मेयर र उपमेयरबीच देशभर द्वन्द्व - Kendrabindu Nepal Online News
मेयर र उपमेयरबीच देशभर द्वन्द्व
स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा लिइने मेयर र उपमेयरबीच बोलचाल नै बन्द छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर वास्तविकता नै यही भएपछि नपत्याई सुखै छैन । देशका अधिकांश स्थानीय निकायमा मेयर र उपमेयरबीच द्वन्द्व छ । र, अचम्मलाग्दो कुरा के भने सबैतिर विवादको मूल कारण भने करिब करिब उस्तै छ ।
उपमेयरले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको मेयरहरूको आरोप छ भने मेयरले आफ्नो भूमिका खोसेको उपमेयरहरूको आरोप छ । यिनै आरोपप्रत्यारोपहरूका भूमरीमा भने सर्वसाधारण नागरिक परेका छन् ।
एउटै कार्यालयमा बसेर एउटै कागजमा सही गर्नुपर्ने मेयर र उपमेयरबीच बोलचालसमेत बन्द हुँदा स्थानीयले हदैसम्मको सास्ती खेप्दै आएका छन् । कतिपय स्थानीय निकायमा त नगर परिषद् समेत हुन सकेको छैन । मेयर र उपमेयरको विवाद बढ्दै जाने क्रममा हात हालाहाल र झडपको स्थिति मात्र सिर्जना भएको छैन, कतिपय मुद्दा अदालतसम्म पुगेका छन् ।
समाजको आदर्श बनेर स्थानीय तहलाई नेतृत्व दिनुपर्ने वर्ग नै यसरी भालेजुधाइमा उत्रिएपछि विकासको सपना कसरी साकार होला ? चुनावमा जनतासँग गरिएका वाचा कता पुग्लान् ? अनि, समाज कुन दिशामा अघि बढ्ला ? अवस्था सोचनीय छ ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयरबीच लामो समयदेखिको विवाद कायम नै छ । महानगरकै एउटा बैठकमा मेयर र उपमेयरबीच हात हालाहालको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो । रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विषयलाई लिएर मेयर र उपमेयरले ठूलै तहल्का मच्चाए । उपमेयर खड्गीको टोलीले तालाबन्दी गर्ने र मेयर शाक्यले ताला फोड्ने काम समेत भए । त्यस्तै सार्वजनिक शौचालय निर्माणको विषयमा, खुल्लामञ्चको अवैध सटर प्रकरणलगायतका विषयमा पनि दुईबीच ठूलै विवाद भयो ।
मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ र उपमेयर अञ्जनादेवी मधिकर्मी
मदनसुन्दर श्रेष्ठ मध्यपुर थिमी नगरपालिका मेयर हुन् भने अञ्जनादेवी मधिकर्मी उपमेयर हुन् । मेयर श्रेष्ठ नेकपाबाट निर्वाचित भएका हुन् भने उपमेयर मधिकर्मी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
उनीहरूबीच विगत एक वर्षदेखि बोलचाल भएको छैन । यही कारणले मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको नगर परिषद्समेत विवादित बन्यो । गत असार १८ गते बोलाइएको नगरपरिषदको विशेष बैठकलाई मेयर र नेकपाका वडाध्यक्षहरूले बहिस्कार गरेका थिए भने त्यसपछि बोलाइएको नगरपरिषद्को बैठक उपमेयरसहित कांग्रेसका वडाध्यक्षहरूले बहिस्कार गरेका थिए । दुवै जनाले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै आएका छन् । उपउमेयर मधिकर्मी आफूलाई निम्तो समेत नपठाएको भन्दै २०७४ चैत १५ गते नगरपालिकाको स्थापना दिवस मनाउने कार्यक्रममा उपस्थित नै भएनन् ।
मेयर सियाराम कुसवाह र उपमेयर नुरजहाँ खातुन
रौतहट कटरिया नगरपालिकामा मेयर सियाराम कुसवाह र उपमेयर नुरजहाँ खातुनबीचको विवाद त झन् अदालतसम्म पुगेको छ ।
उपमेयर खातुनले आफ्नो सहमतिविपरीत बसेको भन्दै नगरपरिषद् बैठकलाई वैधानिकता नदिन उच्च अदातलमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले मेयरले आफूलाई केही पनि अधिकार नदिएको भन्दै विरोध गर्दै आएकी छिन् । उता मेयर कुसवाहले भने उपमेयरले कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अनौठो त के छ भने मेयर र उपमेयर दुवै जना एउटै पार्टीबाट विजयी भएका हुन् ।
मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ र उपमेयर सञ्जु बडुवाल
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका मेयर मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ कांग्रेस र उपमेयर सञ्जु बडुवाल राप्रपाबाट निर्वाचित भएका हुन् । मेयर र उपमेयरको झगडाका कारण नगरपालिकाले बजेटसमेत समयमा ल्याउन सकेन ।
गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारु र उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारु र उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीबीच पनि बोलचाल बन्द छ । कार्यालयका विभिन्न सामान खरिदमा दुईजनाबीच झगडा शुरु भएको हो ।
मेयर रेणु दाहाल र उपमेयर पार्वती शाह
भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल र उपमेयर पार्वती शाहबीच पनि विवाद छ । मेयर दाहालले आफू अनुकूल निर्णय गर्ने गरेको भन्दै उपमेयर शाहले गुनासो गर्दै आएकी छिन् ।
मेयर वेद गच्छदार र उपमेयर सुनिता दाहाल
सुनसरीका मेयर वेद गच्छदार र उपमेयर सुनिता दाहालबीच पनि विवाद छ । यही विवादका कारण उपमेयर दाहालले वडाध्यक्ष रमेश रौनियार र सदस्य कृष्ण तामाङमाथि हातपात नै गरेकी थिइन् । स्थानीय सरस्वती उच्चमाविको खेलमैदान निर्माणका क्रममा उपमेयर दाहालले भुक्तानी रोकेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रममा अनुगमनको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई हुनुपर्ने भए तापनि आपूलाई उक्त जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै उनले विरोध गर्दै आएकी छन् ।
मेयर रामबाबु यादव र उपमेयर मीनाकुमारी यादव
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका मेयर रामबाबु यादव र उपमेयर यादवबीच पनि उस्तै झगडा छ । त्यही झगडाका कारण उपमेयर यादवले २०७४ माघ १४ गते नगरसभाको माइन्यूट नै च्यातिदिइन् ।
त्यस्तै धनुषाकै हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डल र उपमेयर रेणुबीच पनि मनमुटाव झन् झन् चर्किन थालेको छ । मेयर मण्डलविरुद्ध उपमेयर झा ३७ घण्टासम्म अनसन नै बसेकी थिइन् भने मेयरले नगरपालिकाको कार्यालय सार्न खोज्दा दुई पक्षबीच झडप समेत भएको थियो ।
मेयर गणेशबहादुर शाही र उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाही
डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाका मेयर गणेशबहादुर शाही र उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाहीबीचको झगडा पनि अदालतसम्म पुग्यो । उपमेयरले किर्ते माइन्यूट बनाएर सदरमुकाम दुनैमा रहेको केन्द्र जुफालमा सारेको बताएका थिए । त्यसपछि मेयरविरुद्ध उपमेयरले विशेष वैठक नगरसभा बोलाए । उपमेयरले केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
मेयर खड्ग फागो र उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारी
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागो र उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीबीच पनि मनमुटाव छ । मेयर फागो र उपमेयर भण्डारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै एकअर्कालाई जवाफ फर्काउँदै आएका छन् ।
मेयर महेश बस्नेत र उपमेयर सुशिला नेम्वाङ
इलाम नगरपालिका मेयर महेश बस्नेत र उपमेयर सुशिला नेम्वाङबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन । दुवैजना तत्कालीन नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित भएका भए पनि यी दुईजनाबीच महिनौंदेखि बोलचाल बन्द छ । मेयरले तानाशाही शैली अपनाएको भन्दै उपमेयर नेम्वाङले कार्यपालिका बैठक नै बहिस्कार गरी मौन आन्दोलन चलाएकी थिइन् ।
मेयर र उपमेयरबीचको मनमुटाव हुनुमा विविध कारणहरू छन् । अधिकांश नगरपालिकामा मेयर उपमेयर फरक पार्टीका छन् । प्रतिस्पर्धी पार्टीका प्रतिनिधि भएकाले आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित बनाउनका लागि दुई जनाबीच विवाद निम्तिने गरेका छन् ।
अर्काे कुरा मेयर र उपमेयरबीच अधिकारको विषय विवाद निम्तिने गरेको छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, न्यायिक समिति र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । उपमेयरहरूले आफ्ना यावत अधिकारहरूमा मेयरले हस्तक्षेप गर्ने र समन्वय नगर्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सेवासुविधाका विषयमा पनि मेयर र उपमेयरबीच झगडाको निहुँ बन्ने गरेको छ । त्यस्तै नगरपालिको खर्च प्रणाली, बैठकका एजेण्डाहरूलगायतका विषयमा पनि विवाद हुँदै आएका छन् ।
धेरैजसो महिला जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूमाथि लैंगिक विभेद हुने गरेको बताउँदै आएका छन् । देशभर ६ वटा महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगर र ४६० गाउँपालिकामध्ये १८ तहमा मात्रै महिला प्रमुख छन् ।
Prevकृषि अनुसन्धान परिषदले कामै गरेन- कृषिमन्त्री
काश्मिरमा इद: सुरक्षा व्यवस्था झन् कडाNext